Wonekana naPhilip Kerr. Bernie Gunther anorasikirwa nababa vake. | Zvazvino Zvinyorwa
Muy inosuruvarisa uye isingatarisirwi nhau kwanhasi. Munyori weScotland Firipi Kerr Akashaika nezuro achirwara nekenza mwedzi mumwe chete mushure memakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa kwake. Zvisikwa zvake zvinonyanya kuzivikanwa, mutikitivha Bernie pfuti uye murairidzi Scott manson zviuru zvake zvese zvevanoyemura vakasara vari nherera uye, pasina mubvunzo, vakasiyiwa. Kubva pano, uye sevose vadikani vevatema mhando kunyanya, Ndine urombo nekurasikirwa kwako uye ndinorangarira munyori uyu pamwe nekudzokororwa kwebasa rake rakabudirira. Zorora murunyararo, VaKerr.
1 Firipi Kerr
1.1 Bernie Gunther akateedzana
1.3 Mamwe mabhuku
Akazvarirwa mukati Edinburgh, akadzidza paUniversity yeBirmingham uye akawana Master of Laws muna 1980. Akashandawo semunyori wekunyora asati atanga kunyora muna 1989. Chaive chikonzero chebudiriro ye Kurume violets, zita rekutanga renhepfenyuro yake inozivikanwa kwazvo, iya yemutikitivha Bernie pfuti, yakaiswa muNazi Germany. Chii chimwe, Kerr yakaburitswawo rondedzero uye Ruzivo rwevadiki pasi pseudonym ye PB Kerr, Chemhondoro Chakavanzika cheAkhenaten, Iyo Bhuruu Djinn yeBhabhironi o Mambo cobra weKathmandu.
Zvakare anofarira kwazvo mutambo nenhabvu kunyanya, anga atanga a saga nyowani yakagadzirirwa munharaunda iyi nemurairidzi Scott manson semunhu ari protagonist, asi pasina kusiya tema toni.
Bernie Gunther akateedzana
Aimbova mupurisa weKripo uye muongorori weBernhard Bernie Gunther akaberekerwa 1989 game Kurume violets, iyo yakaitika muna 1936. nevaNazi vachiedza kuratidza pasi rose chimiro chinoratidzika pachiitiko cheJJ. OO. Yaive chikamu chekutanga chechitendero chechitatu Berlin noir, izvo zvakare zvinoumba Akapara mhosva y ChiGerman Chinodiwa.
Gunther ndiye anoseka uye asina hanya, ane hasha asi akatendeseka munyika umo kutendeseka, ruramisiro kana hunhu ndidzo pfungwa dzinoonekwa nekusavapo kwavo. Zvanga zviri sajeni muHondo Yenyika I uye akahwina Second Class Iron Cross. Mukadzi wake wekutanga akafa nefuruwenza uye akasiya mapurisa muna 1933, nekuda kwekusashivirira kucheneswa kwaGoering kana kutaurirana nehutongi.
Tinozviziva ne 38 makore uye kushanda se zvakavanzika detector nehofisi paAlexanderplatz. Akazvipira kutsvaga kushaya vanhu, kazhinji vaJudha vaiuraya kana kuendeswa kumisasa yevasungwa. Asi ipapo anofanira kutodzokera kumapurisa. Gare gare, mushure me Hondo Yenyika Yechipiri maanenge ari kumberi kweRussia uye achatorwa, acharoorazve uye otamira South America.
All novels ane hukuru hwakakura hwedudziro mukugadzika kwayo uye iwo ari chaiwo portraits eakasiyana mazera ayo Gunther ari kupfuura nawo.
Mumwe kune mumwe
Kana vakafa vasingamutswi. Waive RBA Nhema Novel Mubairo.
Murume abuda mweya.
Rimwe divi rerunyararo.
Prussian Bhuruu, kwete kuburitswa muSpanish.
MaGreek Kutakura Zvipo, kwete kuburitswa muSpanish.
Gara mu nhabvu yenyika, protagonist yake ndiScott Manson, murairidzi wechikwata che Premier League. Aive mutambi wenhabvu mutambi weArsenal. Akapedza mwedzi gumi nemana ari mu jeri zvekubata chibharo haana kuita uye ipapo akadzidza kurwa uyezve kusanzwira tsitsi zvakanyanya kumapurisa. Anogara muLondon uye akarambana, asi ari kufambidzana naLouise Considine, muongorori weLondon Metropolitan Police.
Iyi nhepfenyuro inodzokorora iyo ins nekubuda kwechikwata chikuru, yakasviba kwazvo iyo yakapoteredzwa uye iriko munhabvu, ine zvinyadzo zvemari, mashandiro asina kujeka kana mienzaniso yeavo vatambi vanova matoyi akaputsika. Iye anotsunga kunyangwe neungochani mukamuri yekuvharira uye, kazhinji, nevese avo manzwiro akakudzwa izvo zvinomutsa kuda kwebhola. Izvo zvakare zvinotsigirwa neicho chaicho chokwadi uye data uye zvese zvinopinda kuburikidza neyekutanga kuferefetwa kwechiitiko
Iyo gehena gehena.
Hurongwa hwemakore mashanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Wonekana naPhilip Kerr. Bernie Gunther anorasikirwa nababa vake.